Ciidamada Dowladda oo howl galo Hub ka dhigis ka fuliyay Suuqa Bakaaraha | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home BOGGA HORE Ciidamada Dowladda oo howl galo Hub ka dhigis ka fuliyay Suuqa Bakaaraha
Ciidamada Dowladda oo howl galo Hub ka dhigis ka fuliyay Suuqa Bakaaraha
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa howl galo ballaaran oo ay maanta ka sameeyeen Suuqa Bakaaraha ku soo qab qabtay dad fara badan, iyadoo howl galkan laga sameeyay goobo gaar ah.
Howl galadaan ayaa laga sameeyay Suuqa Daawada, Dahablaha, cabdala shideeye iyo goobo kale, halkaasoo ciidamada ay ku qab qabteen dhalinyaro lagu tuhmayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxaana mid ka mid lagu soo qabtay bastoolad uu watay.
Howl galkan oo aan wax saameyn ah ku yeelan dhaq dhaqaaqa ganacsi ee Suuqa Bakaaraha ayaa la sheegay in ciidamada ka qeyb qaadanayay ay isugu jireen Boolis iyo Nabadsugid oo ay horkacayeen saraakiil ciidan.
Gudoomiyaha degmada H/wadaag Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa sheegay in howl galkan uu qeyb ka ahaa howl galadii lagu xaqiijinayay ammaanka, isagoo xusay in labo waaxood oo ka tirsan degmada laga sameeyay howl galku.
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyay kordhiyay howl galada ay ka sameynayeen magaalada Muqdisho, kaasoo lagu soo qabtay hub fara badan iyo dad la tuhmayo.
Previous articleSomaliland iyo Puntland oo walaac ka muujiyay maamulka Cusub ee Khaatuma
Next articleFailed Somali pirate prosecution fuels terror trial fears